Lugood Library Waayey? Waxaa dayactir!
> Resource > Lugood > Sidee inaan ku saxno ka dib markii Lugood Library waayay
"My Lugood Library martay. Waxaan gebi ahaanba laga badiyay. Waxaan la isticmaalayo Lugood iyo laba qof oo ah aaladaha Apple muddo dheer, marnaba ma kala kulantay noocan oo kale ah xaalada. Ka dib markii aan habeen ee la soo dhaafay aan computer bilaabay, ay ogaadeen in Lugood Library content martay. Laakiinse iPhone iyo iPad u muuqday si fiican u shaqeeyaan. waxa socda? Fadlan caawiyo. "
Saaxiib ayaa ii sheegay in uu Lugood Library maqan yahay. Waxaan baadhay ee Google, ay ogaadeen in dad dhowr ah ay kala kulantay xaalad la mid ah dhawaan. Qaar ka mid ah laga badiyay maktabadda Lugood ka dib markii ay la casriyeeyay qalabka ay macruufka. Qaar ka mid ah waa laga badiyay, sababtoo ah waxay updated laftiisa Lugood. Haddii aad ku jirtid xaaladda, sii funaanado aad on. Ilaa xad, aad soo celin kartaa Lugood Library maqan. Hoos waxaa ku qoran 2 siyaabo sahlan si aad u hesho Lugood Library dib.
Xalka 1. Soo qaado maqan Lugood Library dib Wondershare TunesGo
Xalka 2. Hel maqan Lugood Library dib iyadoo la bedelayo ay file la mid ah oo gaboobay
Xalka 1. Ka dib maqan Lugood Library la TunesGo Wondershare
Download TunesGo Wondershare!
Haddii aad daraasiin kuwan raadkaygay in aad Lugood Library daray tan iyo update ee la soo dhaafay iyo synced aad Lugood Library in aad iPhone, iPad, iPod ama la kuwan raadkaygay kuwaas, halkii la isticmaalayo xal 2, waxaad isku daydaa inaad TunesGo Wondershare si aad u hesho Lugood Library maqan dib . Sababtu waxa weeye in file jir Lugood Library kuma jiraan ugu dambeeyay music, videos ama barnaamijyadooda aad ku daray in ay Lugood. Wondershare TunesGo kuu ogolaanaysaa inaad music, playlists, videos, iwm wareejiyo qalabka macruufka in Lugood Library, samaynta maqan Lugood Library mid dhamaystiran. Kaliya 3 talaabooyin fudud, oo aad xal u heli karo la waayay dhibaatada Lugood Library.
Tallaabada 1. Ku rakib TunesGo on your computer iyo xiriiriyaan macruufka qalab (iPhone, iPad, iPod) la computer via cable USB ah.
Tallaabada 2. TunesGo ogaan doonaa qalab macruufka ah oo ay muujiyaan in uusan xirmin suuqa ugu weyn. Ka dibna waxaad riixi kartaa Music Transfer iyo dooran "Dhoofinta in Lugood" ka "Dhoofinta" badhanka si ay u kala horreeyaan u dhoofin ka macruufka in Lugood Library.
Tallaabada 3. Sida alaabta iibsatay, waa in aad abuurtaan Lugood, guji Edit> Waxa aad rabtid. Riix tab u Store iyo hubi ikhtiyaarka "Download pre-amar marka la heli karo".
Fiiro gaar ah: . TunesGo (Windows) taageertaa dhoofinta music iyo videos si toos ah u Lugood Library TunesGo (Mac) ayaa hadda ogolaatay oo keliya in aad u dhoofiyaan music in Lugood Library. Sida videos, waa in aad isticmaasho app this inay u dhoofiyaan si Mac hore iyo dambe dajiyaan iyaga Lugood Library on Mac.
Haddii aad Lugood Library xaq u waayay ka dib markii aad u updated, waxaad isku daydaa inaad habkan.
Tallaabada 1. jeelyihiin in Lugood. Raadi iyo folder Lugood Library jiidi file Library Lugood in desktop
Lugood Library.itl waxa uu ku yaalaa:
Windows 8, Windows 7, iyo Windows Vista: / User / username / Music / Lugood /
Windows XP: / Documents iyo Settings / username / Documents My / My Music / Lugood /
Mac OS X: / Users / username / Music / Lugood /
Tallaabada 2. In folder "Previous Lugood Maktabadaha" in folder Lugood, jiidi ku Lugood file ugu dambeeyay taas oo loo magacaabay Lugood Library YYYY-MM-DD.itl. Delete taariikhda faylka this. Waxaa nuqul gal ah in talaabo 2 halka aad ka heli Library.itl Lugood ah.
Ka dib markii uu bedelay file Lugood Library.itl jabtay oo ka weyn mid, waxaad arki kartaa maqan Lugood Library soo laabtay.